Vaovao - Fahalalana kely momba ny vokatry ny milina fanaovan-gazety sy ny fanerena isostatika mafana
Ho an'ny fanerena mafana dia ampiasaina ny filan'ny tsindry sy ny mari-pana voafehy. Matetika, ny tsindry dia ampiharina aorian'ny fisian'ny hafanana sasany satria ny fampiharana ny tsindry amin'ny maripana ambany dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ilay lafiny sy fitaovana. Ny mari-pana mahamay dia ambany ambaratonga an-jatony maro kokoa noho ny mari-pana mahazatra. Ary saika matevina tanteraka no mitranga haingana. Ny hafainganam-pandehan'ny fizotrany ary koa ny mari-pana ambany takiana voajanahary dia mametra ny habetsahan'ny fitomboan'ny voa.
Fomba iray mifandraika amin'izany, ny spark plasma sinter (SPS), no manome safidy hafa amin'ny fomba fanafanana ivelany sy fanoherana. Ao amin'ny SPS, santionany, vovoka na ampahany maitso efa nialoha, dia ampidirina amina grafite maty totohondry grafit ao amin'ny efitrano fantsom-batana ary misy onjam-peo DC mipetaka ampiharina amin'ireo totohondry, araka ny hita eo amin'ny sary 5.35b, raha apetraka kosa ny tsindry. Ny diany izao dia miteraka fanafanana Joule, izay mampiakatra haingana ny maripanan'ny specimen. Ny ony ankehitriny dia inoana koa fa mitarika ny fiforonan'ny plasma na tsiranoka mitete ao amin'ny habaky ny pore eo anelanelan'ny sombintsombiny, izay misy ny vokatry ny fanadiovana ny vongan-tany sy ny fanatsarana ny sinter. Ny fananganana plasma dia sarotra ny manamarina ny fanandramana ary lohahevitra resahina. Ny fomba SPS dia naseho fa tena mandaitra amin'ny fanamafisana ny fitaovana maro karazana, ao anatin'izany ny metaly sy ny seramika. Ny fanamafisana dia miseho amin'ny maripana ambany kokoa ary vita haingana kokoa noho ny fomba hafa, izay matetika miteraka mikraoba voa tsara.
Fanerena Isostatika mafana (HIP). Ny fanindriana isostatika mafana dia ny fampiharana ny hafanana sy ny tsindry hydrostatic miaraka mba hampifanaraka sy hampitomboana vovoka na ampahany. Ny fizotrany dia mitovy amin'ny fanerena isostatika mangatsiaka, saingy miaraka amin'ny mari-pana ambony sy gazy mamindra ny tsindry amin'ilay ampahany. Matetika ny gazy inert toy ny argon. Ny vovoka dia mihombo ao anaty fitoeram-bokatra na vilany, izay miasa ho toy ny sakana tsy azo ovaina eo anelanelan'ny gazy voatsindry sy ny ampahany. Raha tsy izany, ny ampahany izay namboarina sy namboarina tamin'ny fanidiana ny mason-koditra dia azo averina HIP amin'ny dingana "tsy misy container". HIP dia ampiasaina hahatratrarana ny metallurgy feno vovoka. ary fanodinana seramika, ary koa fampiharana sasany amin'ny fanamafisam-peo. Ny fomba dia manandanja indrindra amin'ny sarotra ampiorina fitaovana, toy ny alika marefo, superalloys ary keramika nonoxide.
Ny teknolojia fitoeran-javatra sy encapsulation dia tena ilaina amin'ny fizotran'ny HIP. Kaontenera tsotra, toy ny boaty vy misy varingarina, dia ampiasaina amin'ny vovon-tsiranoka matevina. Ny endrika sarotra dia noforonina tamin'ny alàlan'ny kaontenera izay taratry ny geometry amin'ny faramparany. Ny fitaovana fitoeran-javatra dia voafidy ho malefaka sy marefo amin'ny tsindry sy ny mari-pana amin'ny fizotry ny HIP. Ireo fitaovana fitoeran-javatra dia tokony tsy hihetsika amin'ny vovoka ihany koa ary mora esorina. Ho an'ny metallurgy vovoka dia mahazatra ireo kaontenera vita amin'ny ravina vy. Ny safidy hafa dia misy ny seramika vita amin'ny vera sy porous izay tafiditra ao anaty vata vy faharoa. Ny fametahana vera ny vovoka sy ny faritra efa niova dia mahazatra amin'ny fizotry ny seramika HIP. Ny famenoana sy ny famoahana ireo kaontenera dia dingana iray lehibe izay mazàna mitaky fametahana manokana amin'ilay fitoerany mihitsy. Ny fizotry ny famindran-toerana dia misy amin'ny mari-pana ambony.
Ny singa fototra iray amin'ny rafitra ho an'ny HIP dia ny sambo fanerena misy heaters, fanerena entona ary fitaovana fanolorana, ary elektronika fanaraha-maso. Ny sary 5.36 dia mampiseho ohatra maodely iray amin'ny fametrahana HIP. Misy fomba fiasa roa fototra ho an'ny fizotry ny HIP. Amin'ny maody famoahana mafana, ny kaontenera dia alohan'ny hafanana ao ivelan'ny sambo fanerena ary avy eo dia entina, hafanaina amin'ny hafanana ilaina ary voatsindry. Amin'ny maody famoahana mangatsiaka, ny fitoeran-javatra dia apetraka ao amin'ny sambo fanerena amin'ny hafanan'ny efitrano; avy eo manomboka ny fihodinana fanafanana sy fanerena. Ny fanerena eo amin'ny 20-300 MPa sy ny mari-pana eo amin'ny 500-2000 ° C dia mahazatra.